के हो युरिक एसिड ? यस्ता छन् बच्ने उपायहरु | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य के हो युरिक एसिड ? यस्ता छन् बच्ने उपायहरु
के हो युरिक एसिड ? यस्ता छन् बच्ने उपायहरु
२२ माघ २०७५, मंगलवार १४:५७
युरिक एसिड बढी देखिए पनि जोर्नीको दुखाइ नहुन सक्छ। यस्ता व्यक्तिलाई गाउट नभएर ‘हाइपरयुरेसिमिया’ भएको हुन सक्छ । त्यसले जोर्नीमा असर गर्दैन। जसलाई युरिक एसिड भएकै कारण जोर्नी (खुट्टाको बुढी औँला र आसपास) मा दुख्छ, त्यो गाउट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। युरिक एसिडबाट हुने बाथरोग नै गाउट हो । यो वंशाणुगत समस्या पनि हुन्छ ।
Previous articleरायो सागको फाइदा
Next article‘फाष्ट फूड’, सेवन नगर्दा हुन्छ यस्तो फाइदा !